म TASC परीक्षण कसरी लिन गर्छन्? | USAHello | USAHello
म TASC परीक्षण कसरी लिन गर्छन्? म जान्न के चाहियो? Here are the tools and information you need to take and pass the TASC test.
TASCtest.com तस्बिर सौजन्य
यहाँ छन् 10 steps to help you get ready to take the TASC test.
केही राज्य सट्टा अर्को परीक्षण प्रस्ताव कार्य. तिनीहरूले GED प्रदान गर्न सक्छ® वा HiSET ™. धेरै राज्य एक विकल्प प्रस्ताव. यहाँ भने पत्ता कार्य परीक्षण आफ्नो राज्य प्रस्ताव छ:
2. तपाईं TASC परीक्षण लिन योग्य छन् कि जाँच
तपाईं सामान्यतया लिन योग्य हुनेछ कार्य परीक्षण तपाईं यदि 16 वा पुरानो उमेरको वर्ष र तपाईंलाई भर्ना छैन वा अमेरिकी उच्च विद्यालय स्नातक. केही अमेरिका तपाईं परीक्षण तयारी कक्षाहरू धाउन कि सोध्न. अन्य राज्य मात्र बासिन्दा परीक्षण लिन अनुमति. तिमी सक्छौ find the कार्य आफ्नो राज्य मा परीक्षण आवश्यकताहरु.
3. को TASC परीक्षण बारेमा जान्न
के ज्ञान तपाईं आवश्यक र तपाईं आग्रह गरिने प्रश्न प्रकारको - तपाईं परीक्षण लिन जब आशा के पत्ता: You need to know what’s on the कार्य परीक्षण.
4. को TASC परीक्षण लिन अध्ययन
तपाईं TASC परीक्षण अनलाइन लिन सक्दैन, तर तपाईं अनलाइन यसको लागि तयार प्राप्त गर्न सक्छन्. हाम्रो निःशुल्क अनलाइन वर्ग र निःशुल्क अनलाइन अभ्यास परीक्षण will help you.
5. अनलाइन खाता लागि दर्ता
तपाईं संग एक अनलाइन खाता लागि दर्ता गर्न आवश्यक हुनेछ आफ्नो TASC परीक्षण राज्य पोर्टल. धेरै राज्य तपाईं एक परीक्षण साइट वा तालिका फेला पार्न र आफ्नो परीक्षण भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ खाता छ गर्न आवश्यक. तपाईं कुनै पनि समयमा आफ्नो खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ - के तपाईं आफ्नो परीक्षण लिन तयार छन् नभएसम्म प्रतिक्षा छैन. तपाईं पनि त्यहाँ आफ्नो परीक्षण परिणाम र स्कोर हेर्न सक्षम हुनेछ.
आफ्नो राज्य TASC पोर्टल आफ्नो दर्ता समयमा, तपाईं जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक हुनेछ, तपाईं एक परीक्षण नियुक्ति गर्न तयार छन् सम्म तर भुक्तानी गर्न आवश्यक छैन. तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ directions to register for the TASC test.
6. एक परीक्षण साइट फेला
तपाईं परीक्षण अनलाइन लिन सक्दैन. तपाईं एक परीक्षण साइट मा व्यक्तिमा परीक्षण लिनुपर्छ. एक परीक्षण साइट फेला आफ्नो राज्य पोर्टल.
7. समय तालिका र भुक्तानी गर्ने TASC परीक्षण लिन
तपाईंले TASC परीक्षण लिन तयार छन्, तपाईं आफ्नो राज्य पोर्टल मा आफ्नो परीक्षण नियुक्ति अनुसूची गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं विभिन्न दिनमा परीक्षण प्रत्येक भाग लिन सक्छ. तपाईं लिन चाहनुहुन्छ पहिलो परीक्षण वा परीक्षण निर्णय. त्यसपछि स्थान र मिति र समय चयन. तपाईं एक दिन मा सबै परीक्षण लिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं विश्रामहरू हुन सक्छ त आफ्नो परीक्षण तालिका. सम्पूर्ण परीक्षण लिन्छ7घण्टा 30 मिनेट.
तपाईं परीक्षण तालिका एक शुल्क तिर्न हुनेछ. को TASC परीक्षण आधार मूल्य छ $54.00 सबै पाँच subtests लागि. यसलाई राज्य शुल्क समावेश गर्दैन. राज्यहरु’ शुल्क फरक शून्य देखि $100. पत्ता लगाउ fees charged in your state portal. तपाईँले तालिका रूपमा एक समयमा एउटा परीक्षण भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं वास्तविक परीक्षण लिन अघि, रूपमा निःशुल्क तपाईं धेरै अभ्यास कार्य prep materials and with USAHello practice test. प्रश्न स्वरूप र निर्देशन तपाईं परीक्षण मा देख्ने अभ्यास. केही परीक्षण साइटहरु कम्प्युटरमा परीक्षण प्रस्ताव, अरूलाई कागज मा परीक्षण प्रस्ताव, र केही दुवै प्रस्ताव.
तपाईं कम्प्युटरमा परीक्षण लिइरहेका छन् भने, के तपाईं परीक्षण मा पाउनुहुनेछ उपकरण प्रयोग गरेर सहज प्राप्त गर्नुपर्छ. तपाईं अभ्यास गर्न सक्छन् TASC अनलाइन उपकरण प्रशिक्षण. तपाईं वास्तविक कम्प्युटर आफ्नो परीक्षण साइट मा अभ्यास गर्न निर्णय गर्न सक्छ, माउस र किबोर्ड तपाईं परीक्षण प्रयोग गर्नेछ.
वा के तपाईं कागज परीक्षण रुचि निर्णय गर्न सक्छ. प्रयोग आधिकारिक अभ्यास प्रश्नहरू कागज मा TASC प्रश्नहरूको जवाफ अभ्यास.
तपाईं बारेमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ taking the TASC test on paper र बारेमा taking the TASC test online.
At your test site, you can also take the TASC test readiness assessment. को प्रयोग राख्न free USAHello practice tests धेरै! यी अभ्यास परीक्षण तपाईं मा परीक्षण दिन तयार छन् गर्नेछ. र, तपाईं परीक्षण लिन तयार छन् भने आफ्नो परिणाम तपाईं देखाउने.
म TASC परीक्षण कसरी लिन गर्छन्? यहाँ तपाईँले परीक्षण दिन सफल मदत गर्न केही सुझाव छन्:
Find out what’s on the कार्य परीक्षण
तपाईं परीक्षण दिन पहिलो पटक यो पत्ता लगाउन छैन त्यसैले आफ्नो परीक्षण साइटमा अभ्यास यात्रा बनाउन. जबकि तपाईं त्यहाँ, आफ्नो नियमहरू लागि सोध्न परीक्षण साइट जाँच गर्नुहोस् र कुनै पनि अन्य जानकारी हुन सक्छ.
तपाईं कागज मा गणित वा विज्ञान परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक कैलकुलेटर ल्याउन आवश्यक हुनेछ. यहाँ छ स्वीकृत क्यालकुलेटर को सूची. तपाईं कम्प्युटर-वितरण गणित परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ भने, कैलकुलेटर हुनेछ स्क्रिनमा.
तपाईं आफ्नो कागज ल्याउन अनुमति हुनेछ तर तपाईं टिप्पणीहरू बनाउन को लागि कागज दिइनेछ. तपाईं पनि Pencils र erasers दिइनेछ.
तपाईं एक तकिया र earplugs ल्याउन अनुमति!
आइपुग्छ कम्तिमा 30 मिनेट परीक्षण केन्द्र मा प्रारम्भिक त तपाईंलाई जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र प्राप्त बसे. त्यहाँ गणित परीक्षण बाहेक कुनै विश्रामहरू छन् रूपमा बाथरूम प्रयोग.
प्रत्येक परीक्षण को लागि उच्चतम सम्भव स्कोर हो 800 (को मात्रा मा 300 गर्न 800). न्यूनतम बित्दै जाँदा स्कोर हो:
• पढाइ 500
• लेखन 500 प्लस कम्तिमा2बाहिर 8 को निबंध मा सम्भव अंक
जब तपाईं सबै पाँच subtests पारित, तपाईं समग्र को TASC परीक्षण पारित गरेको छ.
तपाईं एक वा बढि subtests को पारित छैन भने, तपाईं फेरि दुई निःशुल्क subtests लाग्न सक्छ, एक पटक तपाईंले सबै TASC subtests पूरा गरेको छ. दोस्रो पुन: परे Subtests खर्च हुनेछ $10.40 प्रत्येक, प्लस जो आफ्नो राज्य शुल्क. तपाईं परीक्षण retaking अघि प्रतीक्षा हुनेछ कति दिन पत्ता लगाउन आफ्नो परीक्षण साइट वा तपाईं राज्य पोर्टल जाँच.
आधिकारिक को सोधिने प्रश्न पृष्ठ कार्य वेबसाइट